Yenza isipho umama ngoMashi 8 ngezandla zakhe
Kuyaziwa ukuthi ingane yakheke kalula kakhulu izimiso ezifanele ngokokuziphatha main. Abanye abantu bacabanga ukuthi kunzima kakhulu ukukwenza, futhi amagama yokuziphatha nje umbono omuhle. Eqinisweni, ezindabeni umsebenzi yokukhulisa izingane izinyathelo silula. Ngokwesibonelo, uma ingane ifunda njengoba ingane ukwenza isipho umama ngoMashi 8 ngezandla zakhe, ke ngeke usizo kuphela ukuthuthukisa yakhe amakhono zokudala, kodwa futhi accustom unake abathandekayo, funda ukwaneliseka lokukhulula injabulo kwabanye.
Yiqiniso, okuningi waleli bhizinisi luncike bobaba, omkhulu, abazalwane asebekhulile noma odadewabo. Mhlawumbe elula isipho umama ngoMashi 8 ngezandla zakhe - ikhadi. Kulula kakhulu, futhi ungabheka ngempela into eyisimanga ngempela. Ngoba Kuzodingeka nithenge amakhadibhodi anemibala nephepha, glue sikelo ube kunoma yiluphi ekhaya. Manje, izitolo eziningi zinikeza izesekeli ekhethekile ungakwazi ukuhlobisa ikhadi, futhi emakhasini amaningi Internet noma ezincwadini banikwa amakhadi kombhali enhle, lapho ungase ukwazi ukuthatha umqondo ezithakazelisayo kakhulu futhi elula. Colorful ubuhlalu, ubuhlalu, rhinestones, sequins futhi izingxenye ezincane Lacy uzokwenza ukubingelela ikhadi wobuciko kanye wenza umama bayisipho sangempela ngoMashi 8 ngezandla zakhe - ezithakazelisa kakhulu futhi original.
Ehamba esibukweni imibala
Mirror ohlakeni ezimibalabala - esinye isipho ezithakazelisayo for umama. Izandla zakhe ngoMashi 8, kulula kakhulu ukukwenza kanye nesikhathi ngeke impela kancane ukuthatha. Uzodinga isibuko esincane ngaphandle luhlaka (round noma okusaqanda), elihle lezimbali izimbali zokwakhiwa, ne-glue. Ngaphambi umsebenzi kuyinto efiselekayo degrease kobuso kwesibuko i utshwala. Izimbali babukeka ngalokwakhako, zingase ibhecwe noma isiliva Isifutho upende. Vele 15 imizuzu emva Umbala we izimbali unamathele azungezwe kwesibuko. esibukweni kwesitayela nge isimo noma isiliva imibala kuyoba isipho engavamile kakhulu.
Imininingwane spice izimbiza
Ezithakazelisa kakhulu futhi kulula ukwenza izipho umama ngoMashi 8 ngezandla zakhe - yasekuqaleni spice izimbiza. Lokhu kuzodinga amathini angenalutho yekhofi, wire awugqinsi, igolide acrylic upende, izimbali zokwakhiwa, iglu isibhamu. Wire zihambisana uvalwe emhlabeni amabhange kanye zigxile ngayo ingcina. Hlobisa ke kungenziwa zaveza ngegolide upende noma ngokusebenzisa izimbali yokufakelwa. Imbali enkulu kunazo zonke futhi emuhle kakhulu kungenziwa ogibele isivalo embizeni kwaphawuleka ngisho eshalofini eliphakeme.
Ukunika yezakhiwo ingilazi ibala
Izingane ezindadlana ungenza isipho ezimbi nakakhulu umama ngoMashi 8 ngezandla zakhe. Isikhathi yokukhiqiza kuzothatha isikhathi eside, kodwa ke umphumela kuyoba ngokucace nakakhulu. Omunye ongakhetha ezithakazelisayo kakhulu - Umdwebo kombhali ku ingilazi, simulating ingilazi ibala. imfundo Art akadingi, ngoba izitolo eziningi ukuthengisa ukulungele art namabala nengilazi imidwebo, a ngamabhulashi akhethekile nopende. Glass for okuzenzela ingilazi ibala zingatholakala ekhaya noma ithengwe stekloreznoy workshop. imiyalelo elula womshini ingilazi ibala angathengwa at esitolo efanayo noma ingxoxo izinkundla ku-intanethi. Ikakhulukazi ezithakazelisayo uyobheka isipho esinjalo umnyango (lezi zinto manje kubonakala ezindlini eziningi). Kodwa ngaphambi zokuhlobisa umnyango, kuyancomeka ukuba uthintane amalungu omndeni amadala a wobuciko ezifana Kwatholakala enhle ngempela.
Nazi ezinye izipho ezilula kungenza nezingane zabo bonke ubudala konina, ngijabulisa nabo ngokwakho. Phela, akukho ukuze bajabule usikhuphulé njengoba emomotheka kamama ngaleso sikhathi, lapho sipha wakhe isipho.
Monkey kusuka amabhodlela epulasitiki ngezandla zabo
Ikhaya workshop: indlela ukuthunga ingubo ngaphandle iphethini
Funda obumbene ngombala iphethini "izinkanyezi" spokes
Hydrangea ka foamirana izandla siqu
Ukuluka ngensonto iphethini "amazombe" ukukhilosha: isikimu kanye nezincomo
I Neverhood ndima - awuyona into eyinhloko, ukujabulela plasticine!
Sikhula amagilebhisi emadolobheni. Ukulungiselela ubusika
Cross nabokhulumile njengoba iwuphawu magic, amandla ... kukaSathane!
Kungani inyosi uyafa ngemva kokuba singenile, futhi yiziphi umthelela walesi womuntu
Experience Torricelli: ubunjalo nokuqakatheka
I-movie ethi "Moustached Nanny": abadlali nezindima
Indlela yokwenza isigqoko seRunun for intombazane enezandla zakhe
Amaqiniso ethakazelisayo ikhofi mugs
French-Apple Pie: Recipe. French apple pie "Tarte Tatin"